Ku Biir Kooxdayada - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Waa maxay ADRC?
Gudiga Com Central
U doodista ficil
Tallaalka / Warka
Waa maxay COVID19?
Jawaabta ADRC ee COVID19
ADRC on GO
Baahiyaha Aasaasiga ah
Xariirka Wax Barashada ee Internetka - Trualta
Isbahaysiga Xannaaneeyaha Degmada County
Jaalliyadda Saaxiibtinimada leh
Daryeelka Qoyska - IRIS
Cunista Caafimaadka leh
50 Sano Guurada Cuntada
Goobaha Cuntada Kafeeyada Beesha
Cuntada guryaha lagu kariyo
Barnaamijka Foojarka Suuqa Beeraleyda Waaweyn
Medicare & Caymiska Caafimaadka
Soo-saare Qorshe Medicare
Kala guurka dhalinyarada
Qorshaynta Mustaqbalka: Qalinjabinta ka dib
Dhacdooyinka iyo Aqoon isweydaarsiyada
Jadwalka Dhacdada oo Buuxda
Isbahaysiga Ka Hortagga Brown County
Iskaashiga Qorshaynta Daryeelka Hore
Iskaashiga Ka -hortagga Dayrta
Maalinta ugu Danbeyn: Sii socda
PDF Sharaxaad Shaqo
Aqoonta & Xirfadaha
Mushaharka: $ 24.47 / hr
Siiyaa macluumaadka, waxbarashada, u doodista iyo caawinta dadka da'doodu tahay 60 ama ka weyn ama dadka waaweyn ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 60 ee naafada ah ee khuseeya faa'iidooyinka dadweynaha, doorashooyinka daryeelka caafimaadka iyo caymiska, welwelka macaamiisha iyo meelaha kale ee la xiriira; isku duwaha gobolka, bulshada iyo wakaaladaha kale ee dawladda.
Wuxuu kala taliyaa oo kala taliyaa dadka iyo qoysaskooda wixii ku saabsan sharciyada u-qalmitaanka iyo hababka codsiga ee dheefaha dadweynaha; wuxuu bixiyaa macluumaadka iyo soo jeedinta shirarka gaarka ah iyo xiriirka taleefanka; wuxuu qiimeeyaa baahiyaha shaqsiyaadka wuxuuna diiwaangeliyaa ficillada la qaaday iyo xiriirka la sameeyay si loo hubiyo in horumar laga sameeyay macaamil kasta.
Waxay u taagan tahay dadka u doode ahaan go'aannada lidka ku ah ee ay gaaraan hay'adaha maamulka ee la xiriira dheefaha dadweynaha; matalaysa dadka habka rafcaanka kasta haddii ay dhacdo fal xun; la-taliyayaal qareenno kormeer ah oo ku saabsan arrimaha iyo walaacyada; shaashadaha waxay ku baaqayaan la-talin sharci iyo adeeg gudbin qareen; wuxuu bixiyaa xog sax ah oo waqtigeeda ku habboon iyadoo la raacayo hab-dhaqannada iyo nidaamyada la aqbalay.
Waxay qabanqaabisaa aqoon-is-weydaarsiyada laxiriira faa'iidooyinka mawduucyada ujeeddadu tahay siinta macaamiisha macluumaadka hadda iyo saxda ah iyo agabka; qabanqaabiya tas-hiilaadka aqoon-is-weydaarsiga oo kor u qaada shaqada si loo hubiyo in muwaadiniintu ogaadaan fursadda; la kulma qareen ama garyaqaan ka socda kaydka sharciga ee gobolka si uu dib ugu eego shaqada unugga oo uu u hubiyo u hoggaansanaanta xeerarka maxalliga ah, gobolka iyo federaalka.
Wuxuu si fagaare ah ula hadlaa kooxaha ku saabsan barnaamijyada dheefaha ama arrimaha gabowga/naafada; wuxuu horumariyaa aqoon-is-weydaarsiyo waxbarasho; wuxuu u diyaariyaa mawduucyo macluumaad ah oo loogu talagalay warbaahinta; waxay ilaalisaa aqoonta hadda jirta iyo wacyigelinta barnaamijyada faa'iidada.
Waxay siisaa macluumaadka ku saabsan wakaaladaha kale ee bulshada macaamiisha waxayna sameeyaan tixraacyo habboon; shabakadaha hay'adaha kale ee la xidhiidha iyo ilaha ujeedada samaynta xiriir shaqo oo waxtar leh iyo helitaanka macluumaadka hadda ee barnaamijyada.
Horumarinta iyo cusboonaysiinta agabyada la qaybiyey kuwaas oo u adeega sida agabka macluumaadka iyo horumarinta barnaamijka; akhriya agabka la xidhiidha dedaalka lagu ilaalinayo aqoonta hadda jirta ee horumarinta iyo isbeddellada cusub ee la aasaasay ee barnaamijyada waxtarka, sharciga, siyaasadaha iyo hababka.
Waxay leedahay "Waajibaadka Warbixinta" inta lagu jiro xaalad deg-deg ah / musiibo bulshada sida ku cad Qorshaha Diyaargarowga Degdegga ah ee ADRC.
Wuxuu kaqeybqaataa dejinta shaqada asagoo ah koox koox.
Waxa uu ka qayb qaataa qorshaynta iyo dadaalka dejinta yoolka ADRC.
Shahaadooyinka Ugu Yar ee Loo Baahan Yahay
Waxbarashada iyo waayo aragnimo:
Shahaadada koowaad ee jaamacadda oo laga qaatay jaamacad la aqoonsan yahay ama kuliyad, oo ay door bidayaan maaddo la xiriirta Adeegyada Aadanaha iyo waayo-aragnimada laba sano ee faa'iidada dadweynaha, la-talinta faa'iidooyinka, ama goobta la xiriirta; ama wax kasta oo u dhigma oo isugu jira waxbarasho, tababar iyo waayo-aragnimo, kaas oo bixiya aqoonta lagama maarmaanka ah, xirfadaha iyo kartida. Khibrad hore oo lala shaqaynayo dadka waaweyn iyo dadka naafada ah ayaa doorbiday.
Ruqsadaha iyo Shahaadooyinka:
Shatiga darawalnimada ee Gobolka Wisconsin oo ansax ah iyo diiwaan baabuur oo lagu qanco.
Shahaadada AED/CPR waa la doorbiday.
Aqoonta, Xirfadaha & Kartida
Aqoonta wakaaladaha bulshada deegaanka iyo agabka u adeega dadka da'da ah iyo/ama dadka naafada ah iyo qoysaskooda.
Awood u leh inuu fahmo kuna dhaqmo dabeecadda qarsoodiga ah ee jagada.
Kartida lagu fahmo macluumaadka sharciga iyo sharciga.
Awood u leh in uu si cad u qeexo faa'iidooyinka adag, qawaaniinta iyo qawaaniinta si fudud loo fahmi karo.
Aqoonta iyo fahamka Microsoft Office iyo si wax ku ool ah u dhex mara internetka.
Awoodda in si wax ku ool ah loola xiriiro noocyo kala duwan oo dad ah labadaba shakhsi ahaan iyo 4 kooxood.
Awood u lahaanshaha si wax ku ool ah qoraal iyo hadal labadaba.
Awoodda lagu dabaqo farsamooyinka cilmi-baarista si loo ururiyo loona falanqeeyo macluumaadka.
Kartida lagu fahmo lana raaco qaab dhismeedka maamulka iyo hababka rafcaanka ee Nidaamka Lambarka Bulshada, Medicare iyo barnaamijyada kale ee dadweynaha.
Kartida in si dhab ah loogu doodo magaca macaamiisha ADRC
Kartida ilaalinta diiwaannada saxda ah iyo shuruudaha warbixinta barnaamijka.
Sida loo Codso
Codsiyada waxaa laga aqbalaa khadka tooska ah: https://www.governmentjobs.com/careers/browncounty
Kaliya musharixiinta loo xushay wareysiga ama imtixaanka ayaa lala soo xiriiri doonaa.
Haddii aad tahay qof naafo ah oo aad u baahan tahay hoy waqti kasta oo lagu jiro qorista ama shaqaalaynta, fadlan ku wargeli shaqaalaha degmada ee Brown baahidaada. ADRC waa loo shaqeeye fursad loo siman yahay oo ka hoos shaqeeya qorshe hawleed xaqiijin ah.
Dadka oo dhami waa qiimeeyaan, dabaaldegaan, waxayna ku xiran yihiin nolosha suurtagalnimada.
Awood siinta iyo kobcinta nolosha dadka waaweyn, dadka waaweyn ee naafada ah iyo daryeel bixiyaasha.
Waxaan Ka Horeeynaa Dadka
Sheeko Kasta Ayaa Arimaya. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan midba midka kale kor ugu qaadi lahayn.
Waxaan ku nool nahay rabitaankeena waxaanan wadaagnaa mahadnaq wax kasta oo aan sameyno.
Dhis Xiriir Ku Saabsan
Waxaan kobcinaynaa iskaashiga iyada oo loo marayo is-dhexgal macno leh, si wadajir ah ayaan u xoog badnahay.
Waxaan carqaladeyneynaa heerka loo qoondeeyay aragtida iyo abuurista mustaqbalkeena.
Waxaan wadnaa isbadal aan rabno inaan ku aragno beesheena
Waxaan nahay iftiiminta dadka iyo fikradaha dhulka ka saaraya
Waxaan nahay hal abuurka isbedelka
Furan Isniinta - Jimcaha 8 am - 4:30 pm
(Waqtiyada kale ballanta)
Yaa waxaan nahay
Naga Like on facebook.com/adrcbrowncountywi
Siyaasadaha Websaydhka | Dhaqanka Asturnaanta
ADRC waa hay'ad samafal ah, 501 (c) (3) urur.
Copyright © 2021 Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Waxaa diyaariyey: Nicholas Hopp | Horumarinta Webka & Naqshadeynta